Trangana kolikoly Afaka apetraka eny anivon` ny zandary ny fitarainana
Afaka misolotena ny birao misahana ny ady amin`ny kolikoly (BIANCO) ankehitriny ireo biraon` ny zandarimariam-pirenena ankehitriny. Efa nahazo fiofanana manokana ho “officier de police judiciaire”
FI.TRA.MA Hamoaka ny tsiambaratelon’ny sakana mahazo azy
Namoaka filazana ny Ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina afak’omaly alatsinainy mikasika ny tsy fahafahan’ny FI.TRA.MA na ny Fitsaboana Tradisionela Malagasy manao dokam-barotra amina haino aman-jery intsony.
Razana tsy azo avoaka an'Antananarivo Alevina eny Anjanahary aloha
Eny Anjanahary no halevina ny razana izay tokony halevina any amin’ny faritra, kanefa tsy afaka hoentina mivoaka an’Analamanga noho ny fisian’ny valanaretina coronavirus, araka ny fanazavan’ny Jeneraly Elack Olivier
Antenimieram-pirenena Nodimandry ny Depiote Lucien Rakotomalala
Nodimandry halina ny depiote voafidy tao Morombe, Lucien Rakotomalala. Niparitaka tao anaty tambazotran-tserasera ny vaovao fa Covid 19 no naha lavo azy.
«Fandraharahana ny fonja mivoatra, manaja ny zo maha olona, antoky ny fandriampahalemana sy ny fampandrosoana ». «Tsy misy filaminana sy fandriampahalemana raha tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy ireo mpandraharaha ny fonja », hoy ny praiminisitra Ntsay Christian, izay nisolotena ny filoha. Hisy ny lamina vaovao hapetraka handrindrana ny asa rehetra ary ny eo amin’ireo mpitsara sy mpandraharaha ny fonja. Ezahina ny hanangana fonja vaovao hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena mba ho fanajana ny zo maha olona, ho an’ireo voafonja, satria iaraha-mahalala fa be loatra ny isan’izy ireo ka tsy mifanaraka amin’ny fotodrafitrasa misy eto amintsika. Hojerena manokana ihany koa ny hamerenana eny anivon’ny fiarahamonina an’ireo olona nisazy. « Tsy natao ho toerana famaizana fotsiny ny fonja, fa toerana natao hisaintsainana sy hahafahana mandamina ny famerenena ireo voafonja eny anivon’ny fiaraha-monina, rehefa mahavita ny saziny izy ireo », hoy ny praiminisitra. Nankasitraka ireo ezaka efa vitan’ny minisiteran’ny Fitsarana, izay mpiahy ny fandraharahana ny fonja ny lehiben’ny governemanta, anisan’izany ny fanatsarana ny sakafon’ireo voafonja, hisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo saingy mbola betsaka ny ezaka miandry, toy ny fampitaovana ny fiara mitondra ireo voafonja mamonjy ny fitsarana azy, indrindra ny fitaovam-piadiana ho an’ireo mpandraharaha ny fonja mba ho fitandroana ny filaminana.